रूसी पुरुष संग दूर प्राप्त रूपमा धेरै एक महिला जो कहिल्यै"
रूसी पुरुष संग दूर प्राप्त रूपमा धेरै एक महिला जो कहिल्यै»
को एक लेख छ कि आकर्षित सबैभन्दा प्रतिक्रियाहरू एक क्रमिक बिवरण कि म यस्तो लेखे भन्दा पन्ध्र वर्ष पहिले, एक रूसी पत्रिका मानिसहरू लागि (जस्तै स्विडिश क्याफे). भाषण थियो रूसी मानिस देखि दृश्य मेरो बिन्दु रूपमा (त्यसपछि) महिला । यो मजा को एक बिट, र एक भयभीत ककटेल. उदाहरणका लागि, म यस्तो लेखे कि रूसी पुरुष जो भए हालै रोकियो वोदका पिउने र सुरु बियर पिउने, थियो जो एक परिणाम को पतन को, सोभियत संघ, जब अचानक एक धेरै पश्चिमी बियर मा देखा पसलहरु । तर त्यहाँ थियो एक गम्भीर निहितार्थ, पाठ मा थियो जो कि रूसी मानिसहरू गर्न जारी कि लाग्छ तिनीहरूले सही थियो पेय मा सबै, कम गर्न निरन्तर पीडित जीवन दिन्छ । रूसी मानिसहरू पक्कै धेरै भोगे इतिहास भरि, तर यो साँचो होइन भनेर रूसी महिला भोगे छन्. तथापि, मात्र एक व्यक्ति स्वीकार गर्न सक्छ दुःखकष्ट रूपमा एक सानो, आवश्यक छ भने, विजयी चिन्ह । रूसी पुरुष थाहा छ कि यो कार्ड जान्छ भन्ने घर संग धेरै रूसी महिला । एकै समयमा, यो पीडित छ लागि बहाना तिनीहरूलाई लागि जिम्मेवारी लिन धेरै कठिन कुराहरू मा जीवन छ । आज म शायद भनेर उहाँलाई बताउन को क्रनिकल एक सानो विभिन्न छ, तर केही कुरा अझै पनि लाग्न प्रासंगिक । धेरै मानिसहरू रूस मा अझै पनि दया संग प्रेम । यस छैन के म अनुभव, तर के रूसी महिला अक्सर भन्न ।»ओह, त्यो महसुस उहाँलाई लागि खेद, त्यसपछि तिनीहरूले चाँडै एक जोडी बन्न,»तपाईं अक्सर सुन्न, उदाहरणका लागि.
रूसी पुरुष संग दूर प्राप्त एक धेरै, बस जस्तै एक महिला जो कहिल्यै सक्छ. मलाई थाहा छैन कसरी धेरै परिवार, मलाई थाहा छ कि रूस मा, पोस्ट-सोभियत देशहरुमा, जो हराएको आफ्नो सम्पत्ति वा अपार्टमेन्ट लागि विभिन्न कारणहरू छन् । तर बेला मा महिला परिवार, आफ्नो रोल र केही लिन परिवार खुवाउन गर्न, सट्टा तपाईं पाउन एक मानिस मा घर लागि खेद महसुस आफूलाई र पिउने । पत्नी गर्न सक्छन् कसम खान्छु गर्न र तिनीहरूलाई कुरा सबै प्रकारका बात बारेमा उहाँलाई संग मित्र, तर त्यो क्षमा दिनुहुन्छ र जारी गर्न आँट्नुभएको छ, केवल पति लिन्छ पैसा किन्न कम्तीमा एक बोतल रक्सी. त्यो उहाँलाई छोडेर, छैन किनभने»यो एक निरादर छ उहाँलाई र अन्यथा त्यो.»उहाँले गरेको छैन त्यो छौँ गत एक हप्ता बिना मलाई।»तर, एक महिला अत्यन्तै लज्जित पिउन । नै लागू गर्न सम्बन्ध संग छोराछोरीलाई । जिम्मेवारी छोराछोरीलाई लागि लगभग सधैं संग निहित महिला । त्यो एक शौक, त्यो यात्रा संग मित्र, र उहाँले काम गर्न छ.
उहाँले काम लिन्छ र छोराछोरीको हेरविचार
समय छैन, कोठा छोड्न लागि अनुसन्धान काम र एक सम्भालना सेवा । त्यो पहिले नै भनेर थाह छ भने त्यो गर्भवती हुन्छ, त्यो गुमाउने जोखिम उनको काम किनभने, उनको पुरुष रोजगारदाताले सोच्छ कि त्यो छैन मात्र प्रसूति बिदा मा, तर पनि भनेर थाह पाउँदा उनको पति यो के छैन । मा छोडपत्र को मामला मा, छोराछोरीलाई सधैं छन् आमा संग, र मा सबै भन्दा राम्रो पति दिन्छिन् भत्ता (एउटा पुरानो, तर अझै पनि रोचक सर्वेक्षण देखाउँछ कि यस वर्ष मात्र एक प्रतिशत भत्ता द्वारा भुक्तानी छ पुर्खाहरूले). पिताजी हुन सक्छ गर्न उत्प्रेरित गर्न अर्को शहर वा देश — केहि छ कि बच्चाहरु को आवश्यकता हुन सक्छ, एक पिताजी, केही. मलाई थाहा छ कि धेरै रूसी मानिसहरू जो लगभग कहिल्यै पिटे आफ्नो छोराछोरीलाई, तापनि तिनीहरू सबै को लागि गरियो यस. वर्षौंदेखि, म कुरा गर्न धेरै मानिसहरू (बुबा, आमा, मनोवैज्ञानिक, इतिहासकार र वकिल) बारे किन रूसी पुरुष, महिला रुचि छैन, आवश्यकता महसुस गर्न अधिक जिम्मेवारी लिन को लागि आफ्नो परिवार वा आफूलाई लागि. अधिकांश मानिसहरू विश्वास छ कि, यो थियो, यो असाधारण इतिहास को रूस गरे कि रूसी, व्यक्ति कमजोर छ, र रूसी बुबा त्यहाँ छैन. क्रान्ति, नागरिक युद्ध, दुई संसारमा युद्ध र थियो मान्छे को एक धेरै.
ती जो बाँचेका थिए
महिला लिन थियो जिम्मेवारी । तिनीहरूले प्रतिस्थापन गर्न थियो, मानिसहरू दुवै क्षेत्र र छोराछोरी हुर्काउन. एकै समयमा, एक पुरा पुस्ता को केटाहरू बिना हुर्क्यो पुरुष भूमिका मोडेल छ । यदि तपाईं थिएन पिता छ, तर अभ्यास मा तपाईं एक छैन, यो गर्न कठिन हुन, एक असल पिता. आफैलाई संग र निर्णय भंग गर्न गर्नुहोस् । एक सर्वेक्षण सञ्चालन मा रूसी देखाइएको छ भन्ने बारेमा नब्बे प्रतिशत को पिता भनेर महसुस, तिनीहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न छैन मात्र को विकास को लागि, छोराछोरी, तर पनि एक स्वस्थ र सुखी जीवन खर्च, समय आफ्नो बच्चाहरु संग.
हाल को वर्ष मा, यो सुरु भएको छ शुरू धेरै गत्ता परियोजनाहरु भर रूस
छन् पत्रिका र वेबसाइट इन्टरनेटमा सुरु गरेका छन् छलफल गर्न दुवै पक्षलाई, मा — गत्ता जस्तै रोल. धेरै शहर अब एक जहाँ भविष्य छ, किनभने बुबाले पूरा गर्न सक्छन् अरूलाई मा, यो नै अवस्था भावना बारेमा कुरा गर्न र समस्या छ । — सामाजिक सेवा पनि सुरु जबरजस्ती गर्न अनुतरदायी पुर्खाहरूले यात्रा गर्न राम्रो हेरचाह छोराछोरीलाई. शहर मा नजिकै येकाटरिनबर्ग, मानिसहरूको एक समूह सङ्कलन पैसा लागि एक मूर्तिकला चित्रण एक सानो केटी खुला हतियार संग. यो मूर्तिकला भनिन्छ»ड्याडी, जहाँ तपाईं छन्?»गर्ने लक्ष्य लिएको छ बनाउन शहर पुर्खाहरूले लाग्छ भने तिनीहरूले गर्न सक्छन् समय खर्च छैन संग, छोराछोरीलाई अधिक अक्सर । हाल, म भेट एक जवान, भर्खरै नियुक्त रूसी पिता जसले मलाई भन्नुभयो कि आफ्नो बुबा एक रूसी नागरिक । अब चासो शिकार, तर कम से कम यो रोचक छ को विकास हेर्न आफ्नो सानो छोरी । भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो देखिन्छ अधिक जस्तै एक सानो बच्चा, यो हुनेछ अधिक मानव । म जान चाहनुहुन्छ, उनको संग अन्त । म आशा कि उनको संचार हुनेछ उनको खुसी बनाउन, र सायद त्यो वृद्ध हुन्छ, उनको छोरी छनौट हुनेछ एक मानिस जसलाई त्यो लागि खेद महसुस लागि विभिन्न कारणहरू छन् ।
← अनुभव हुन स्वीडेन मा. एक बैठक वयस्क लागि. बिना दर्ता. वास्तविक फोटो
विकल्प सबै भन्दा राम्रो वैकल्पिक साइटहरु →